आफ्नो बच्चालाई Genius कसरी बनाउने ? | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र १७ गते ०४:१५
हरेक अभिभावक आफ्नो बच्चालाई जिनियस बनाउन चाहन्छन । अरु ब्यक्तिको बच्चाहरुको तरक्की, सफलता देखेर आफ्नो बच्चा पनि त्यस्तै बनाउन चाहन्छ्न । अहिलेको समयमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै आफ्नो बच्चालाई जिनियस, सस्कारी युक्त बनाउनु हो । तर अधिकास अभिभावकलाई यो कुराको महसुस हुदैन कि आफ्नो बच्चालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सम्पुर्ण अभिभावक कै जिम्मामा हुन्छ । तर अधिकास अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई गलत पर्बरिस गरिरहेको हुन्छ जस्तो बच्चाको इच्छा चाहना रुचि बिपरित अभिभावकले आफ्नो इच्छा चाहना थोपार्ने गर्छन् । मैले यो बाक्य धेरै सुन्ने गरेको छु "मेरो मम्मी ड्याडिको कारणले मैले विषय पढेको हु !" यसरी केही अभिभावक आफ्नो इच्छा यसरी आफ्नो बच्चामा लाद्ने गर्दछ्न जस्को कारण बच्चाले आफ्नो सिर्जनात्मक र जिनियस हुने मौका गुमाउछ्न । केही महिना अगाडि नेपालमा साग गेम भएको थियो, जहाँ पौडिबाजमा गौरिका सिंहले चार संवरण पदक जितेकी थिइन । उनको यो सफलतामा उनको परिवारको ठूलो भुमिका रहेको थियो भन्ने कुरा बिभिन्न सन्चार माध्यममा आएको छ । यिनको परिवारबाट पनि हामिले धेरै कुरा सिक्न सक्छौ । र यस च्याप्टरमा म तपाइलाइ आफ्नो बच्चालाई कसरी जिनियस बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा बताउने छु ।
१) Find & Suoport your child's PASSION
सर्बप्रथम हरेक अभिभावकले आफ्नो बच्चाको passion के हो त्यसलाई पत्ता लगाइ उनलाइ सपोर्ट गर्नु पर्दछ, न कि आफ्नो इच्छा चाहना थोपार्ने । आफ्नो बच्चालाई जिनियस बनाउने पहिलो बाटो नै उनको प्यासन लाई नर्चर गर्ने । यो समयमा अभिभावकको ठुलो भुमिका रहन्छ । गौरिका सिंहलाई पनि उनको परिवारले गौरिकाको प्यासनलाइ सपोर्ट नगरेको भए सायद उनी यो स्थानमा आउदिन थिइनन । उनलाइ उनको आमा गरिमा राणाले धेरै नै साथ दिएको थियो भनेर बताइकी थिइन् स्मरण रहोस गरिमा राणा २०५० सालको एस. एल. सि टपर हुन ।
२) Spend on Skill Development not on Fun & entertainment
अधिकास अभिभावकले गल्ती गर्ने यहि कुरामा हो आफ्नो बच्चालाई फन मनोरंजनमै बढी भन्दा बढी खर्च र समय बिताउछ्न । आफ्नो बच्चालाई जिनियस बनाउन उनको प्यासन अनुसारको स्किल डेभलप गर्नमा खर्च गरिदिनु पर्छ ताकी उनको ट्यालेन्ट निखारियोस । यस्तो कुरामा गरिएको खर्चले पछि अन्तत धेरै फाइदा दिने गर्छ । अब सोच्ने पालो आएको छ कि के तपाइले गर्दै आइरहेको खर्चले तपाइको बच्चाको ट्यालेन्ट डेभलप भैरहेको छ ? अब देखि बच्चाको मनोरञ्जन अनेक इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्समा खर्च नगरौ । बच्चाको हुनर डेभलप गर्न सचेत हो औ ।
३) Develop Self Descipline in your Child
यदि कोहि बच्चा सफल छन भने यसको कारण हो उनको अभिभावकले दिएको अनुशासनको पालनको प्रमुख कारण ।आफ्नो बच्चालाई अनुशासन सिकाउन जरुरत छ यसको बानी बसाल्नु जरुरी छ । सफलता प्राप्त गर्न अनुशासनको निकै महत्व हुन्छ।आफ्नो बच्चालाई अनुशासनको महसुस गराउन सक्नु पर्दछ कि मेरो सफलतामा यसको निकै महत्व छ भनेर । यी तीन फर्मुला हरेक अभिभावकले आफ्नो बच्चामा लागू गर्ने हो भने हरेक बच्चा जिनियस हुन सक्छन् ।